Iimpawu kunye nokhathalelo lwe-comet fish (iCarassius auratus) | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Ihlaziywe 03/08/2021 12:34 | Intlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngentlanzi eyaziwa ngamagama aqhelekileyo aqhelekileyo. Imalunga ne-comet fish. Ikwabizwa ngokuba yi-carp yegolide kunye ne-carp yegolide. Igama layo lenzululwazi ngu ICarassius auratus kwaye yeyosapho lwaseCyprinidae. Iyaziwa kakhulu ngumntu wonke kuba yenye yeentlobo ezihlala zihamba emanzini.
Ngaba uyafuna ukwazi yonke into enxulumene nenye yezona ntlanzi zidumileyo emhlabeni we-aquarium?
1 Iimpawu zentlanzi ezi-comet
2 Ukutya kweGoldfish
3 Ukutyisa i-Aquarium
5 Unonophelo lweKitefish kunye neemfuno
Iimpawu zentlanzi ezi-comet
Le ntlanzi ithelekiswa kwizihlandlo ezininzi kunye nezinye iintlanzi ezikwi-aquarium. Ubungakanani bayo buncinci kunabanye kwaye nokuba siyithelekisa neminye imizekelo yosapho olunye. Kunokuthiwa ubungakanani buyahluka ngokuxhomekeka kwiimeko ezihlala kuzo kunye nohlobo lokutya olunako. Nangona kunjalo, ngokubanzi, ubungakanani bayo ingaphantsi kweesentimitha ezili-10. Ubunzima obulungele ezi ntlanzi sisiqingatha seponti.
Inezipiko zepectoral ezimbini kunye nezinye ezimbini zomoya. Nangona kunjalo, inesiphelo esinye sempundu. Isiphelo somsila sithathwa njengesi silula xa sithelekisa nezinye iintlanzi. Ibanzi kakhulu.
Ngokubhekisele kumbala wayo, ayihlali ibonisa amabala emibala eyahlukeneyo, kodwa inombala ofanayo kuwo wonke umzimba. Ithoni yabo yolusu ihlala imnyama (ngokufana nethoni ye Intlanzi yeteleskopu), Bomvu, orenji kunye nomhlophe. Nangona zihlala zinombala omnye emzimbeni wonke, kukwakho nemizekelo yosapho olunye olunemibala emibini. Basagcina imibala efanayo ekhankanyiweyo.
Into enomdla eyenza ukuba le ntlanzi ibaluleke kakhulu kukuba ubungakanani bombala wayo inokwahluka ngokutya kwakho. Oko kukuthi, kuxhomekeke kuhlobo lokutya okutyayo, kunokuba nemibala eyahlukeneyo kunye namandla ahlukeneyo.
Nangona esi silwanyana sinemibala eyahlukeneyo okanye indibanisela yonke, saziwa kakhulu ngombala waso odumileyo wegolide.
Kwimeko yabo yendalo ezi ntlanzi zi-omnivores. Banokufumana ukutya kwabo kokubini amaxhoba kunye nezityalo. Ukuba uyigcina kwi-aquarium, kubalulekile ukulawula ukutya okutyayo, kuba ayinakho ukuzilawula. ICometfish ayazi ukuba batye kangakanani ukutya kwaye, ukuba batya kakhulu, banokuba neengxaki zempilo (inokubangela nokusweleka kwabo).
Nangona ukutya kwazo kungafunisi nto kwaye kwahluka kakhulu, ezi zilwanyana zikhetha ukutya imibungu kwimeko ezininzi. Bayayenza rhoqo ukusuka kwiplankton, ulwandle kunye namaqanda amancinci ezinye iintlobo zentlanzi.
Ukuba unayo intlanzi njengesilwanyana sasekhaya kwi-aquarium, kufuneka ubukele ukuba itya ntoni kakuhle. Ukwazi isahlulo esifanelekileyo onokuthi usinike, kuya kufuneka ufake isicelo umthetho wemizuzu emithathu. Lo mgaqo uquka ukubona ukutya okungakanani intlanzi ekwaziyo ukungenisa kwimizuzu emithathu. Akugqiba ukwenza oku, niya kwazi ukuba nantsi isixa sokutya enimfanele ukumnika sona. Ukuba umnika ukutya okuninzi, kunokukhokelela kwiingxaki zempilo, kuba akanalo uluvo "lokuziva ugcwele." Ukuba sijonga umthetho wemizuzu emithathu, kuya kwanela ukondla iintlanzi kabini ngeveki. Kuba akanawo umsebenzi omninzi kwitanki leentlanzi, ukondla kabini ngeveki imizuzu emithathu kuya kubakho iimfuno zakhe ezisisiseko.
Ukuba ufumanisa ukuba kule mizuzu mithathu intlanzi itya kancinane, yongeza izityalo okanye imifuno enokutyiwa kwindawo engqongileyo okanye kwindawo yendalo ukuze ibenovimba xa kukho imeko engxamisekileyo.
Ukutya okufanelekileyo kule ntlanzi kuthengwa kwiindawo ezizodwa zokuloba iintlanzi. Imalunga ne ukutya okungenamanzi emzimbeni. Unokongeza ezinye izibungu ezomileyo kuyo.
I-comet fish ithathwa njengentlanzi ethambileyo ekuthinjweni, ke ayizukuhlasela ezinye iintlanzi. Ngokuchasene noko, iyakwazi ukumelana nazo zonke iingxaki ezihlala kwindawo ekude kakhulu nendalo.
Ukuze intlanzi yegolide iziphathe kakuhle, kubalulekile ukugcina zonke iiparameter zisebenza kakuhle. Ukuba uhlala ugcina iimfuno zakho zigutyungelwe ngokupheleleyo, uyakwazi ukuhlala malunga neminyaka engama-30.
Nangona kukho ezinye iintlobo zentlanzi etankini, ngekhe abonakalise isimo sengqondo esindlongondlongo. Ayisiyo ntlanzi yendawo. Kufuneka iqatshelwe ukuba ziyintlanzi yokuqubha elungileyo kwaye kuyacetyiswa ukuba i-aquarium ibe nkulu ukuze izalisekise izakhono zayo zokudada.
Kuyacetyiswa ukuba intlanzi yegolide ikhatshwe zezinye iintlanzi zolo hlobo ukuthintela ukuphazamisa ezinye iintlanzi ngesantya sokudada okanye ukuba ukutya kwazo. Kuyacetyiswa ukugubungela i-aquarium ukusuka phezulu Ukuthintela ukuba ingatsiba.
Unonophelo lweKitefish kunye neemfuno
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kubalulekile ukugcina i-aquarium enobungakanani obukhulu ukuze usebenzise izakhono zakho zokubhukuda. Umthamo ofanelekileyo we Itanki leentlanzi likwiilitha ezingama-57. Qho xa ufuna ukongeza omnye umzekelo wentlanzi yekite, kuya kufuneka wongeze ezinye iilitha ezingama-37 etankini. Njengokuba iminyaka ihamba, iintlanzi zifuna ubungakanani etankini.
Enye into ebalulekileyo kukugcina i-aquarium ilungile kwaye icocekile. Ngokumalunga nobushushu obufanelekileyo, kuba ikhula kwindawo ezinemozulu epholileyo, isondela kwiidigri ezili-16. Ngale ndlela awuzukubandezeleka xa ushiya imeko yendalo. Ukuba iqondo lobushushu alilunganga, iintlanzi zingagula zide zife.
Kuyacetyiswa ukuba ungagqithisi kakhulu kwinani leentlanzi kwi-aquarium efanayo nokuba zithambile, kwaye zingazishiyi zodwa.
I-Goldfish ifikelela ekuvuthweni ngokwesondo xa ifikelela unyaka wobomi malunga. Ayisoloko izisa iingxaki ekuthinjweni ngenxa yokuzala kwayo okoko igcina amanzi ecocekile kunye nokutya okwaneleyo.
Xa zikwimeko ezifanelekileyo, indoda ilandela imazi ukuqala ukukhwelana. Amabhinqa atyhalelwa kwizityalo zasemanzini aze akhulule amaqanda. Uyakwazi ukuxela ukuba indoda iyabelana ngesondo ngamehlo. Kuya kufuneka uqaphele kuphela amabala amhlophe athi isilwanyana sikhule kuwo kunye neepectoral fins.
Umfazi uyakwazi ukubeka phakathi kwama-300 nama-2000 amaqanda xa kuzalwa nganye. Amaqanda aqanduselwa emva kweeyure ezingama-48-72. Owona mgangatho uphakamileyo wokuzala kwenzeka ngexesha lentwasahlobo ngamaqondo obushushu ashushu.
Njengoko ubona, le ntlanzi yenye yezona zininzi kwihlabathi le-aquarium kwaye kulula kakhulu ukuzinyamekela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zekhayiti
UNancy mabel miraglia sitsho
Mholo. Ndineminenke emikhulu (8cm) kwaye bandinika enye yeentlobo ezincinci ezincinci (2cm). Ngaba bangahlala kwitanki enye yeentlanzi?
Phendula kuNancy Mabel Miraglia
Molo, ndinenyanga ene-8 ubudala kwaye ndinayo nezinye iintlanzi ezincinci. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndiye ndaphakama wabe eyedwa etankini, ndabeka ezinye iintlanzi ezincinci kuye waphinda wedwa. Ngaba inokuba uzityile? Enkosi
Ndineekayiti echibini kwaye ezindala zineminyaka emi-3 ubudala kwaye zilinganisa ukusuka kwi-20 ukuya kwi-25 yeesentimitha kwaye ukuba azikhatywa ziya kuzitya ngokukhawuleza.
Ndineekayiti echibini kwaye ezindala zineminyaka emi-3 ubudala kwaye zilinganise iisentimitha ezingama-20 ukuya kuma-25 kwaye ukuba azikhabi, ziya kuzitya ngokukhawuleza. Ebusika banokufikelela kwiidigri ezi-4 nangaphantsi kwaye ehlotyeni bangafikelela kuma-27. Ebusika badla kancinane kwaye ehlotyeni kancinci, ndibanika umhlaba, ndicinga ngenja etyumkileyo kunye nesonka